China Inorema Duty Ruoko Rori LH5002 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:LH5002
Yakavhurwa Saizi: 51 × 55.5x127CM
Saizi yakaiswa: 30 × 55.5X100CM
Kukura kweplate: 24.5x38CM
Kugona: 150 KGS
Anorema ruoko ruoko rori, sutu yekushandisa mune yekuchengetedza. Iyo ndiro inodenhwa, zvakare iyo dhodhi yerori inogona kuchinjiswa kumusoro uye pasi, inogona kuchengetedza nzvimbo uye inounza nyore kukuru kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Easy kupeta, nyore kushandisa.
Inonyaradza "P" dhizaini dhizaini.
Yakawedzera hombe chigunwe.
Anorema basa welded furemu uye chinotsiva axle.
Yakakura mhedzisiro hubs ine yakavhara bhora fani
Iyi 150kgs kukwanisa ruoko rori yakagadzirirwa kushandiswa kwemazuva ese. Kuvakwa kwemhando yepamusoro nehuremu hwechirema inoregedzwa kunopa kuvimbika kwakasimba uye nyore kurodha zvinhu zvinorema. Iyi irori ruoko runyoro rwekutarisa ine yakapfava-inofamba ichidzika mataira erabha uye P-yakarongedzwa chengetedzo mubato Iyo P-kubata inobvumira kune imwe kana maviri ruoko ruoko. Iyo ine tubing yekuwedzera simba uye kusimba. Iyo yakakwirira inopa yakanakisa hi-stacking application. Iyo yakafara zvigunwe inobvumira kutakurwa kwezvakakura zvinhu bulkier zvinhu. Mawiricheya anorinda anochengetedza mutoro kubva kumataya. Iwo akasimba punication proof matayi haambo enda. Powder jasi kupedzisa inopa yakasimba kusimba.
Sevha musana wako kana uchifambisa kana kubata zvombo zvemidziyo yemumba nezvimwe zvinhu zvakakura pachako. The Buffalo zvishandiso 150kgs inorema basa mutyairi dolly ichakubatsira iwe kuwana firiji, washer, uye yakaoma kubva kumashure kwetiraki yako kupinda mumba mako nyore. Iyo dolly yakafara zvigunwe zvigunwe izvo zvinopa yakakura mitoro yakawanda simbi yekugara pamusoro. Iyo yakanakisa P kubata dhizaini inoita kuti dolly ive nyore kubata uye kuibata. Iyo yakakura tsoka kudhinda, ichipa inorema mitoro yakawanda kugadzikana uye kutsigirwa. Iyi inorema basa ruoko rori yakavakirwa kuti irambe iripo. Magadzirirwo acho ane chinodzoreredhwa vhiri dhata, uye imwe masendimita dhayamidhi yesimbi chubhu yakaturikwa.
Yepfuura: Kuruoko Dutu Rekushandisa Rori LH5001
Inotevera: Multi mabasa Folding Wagon DX6001
Akanakisa Anotakura Ruoko Ruoko
Kurema Duty Kunoshandura Ruoko Rori
Kurema Kwazvo Kubatira Ruoko Rori
Yakakura Duty Hand Cart
Kuruoko Rweruoko Ruoko
Kuruoko Duty Ruoko Trolley
Kuruoko Rweruoko Rutsetse 300kg
Kurema Kwemavoko Ruoko Rwekutya Irori
Kurema kweDhivha YeTiraki 300kg
Kurema kweDanho Kukwira Trolley
Huturu Duty Rori Dolly
Metal Ruoko Cart
Simbi Dolly Cart